ပျားထုတ်ကုန်များ: အဆိုပါမူရင်း Superfoods - J & S မှရုက္ခဗေဒ
ပျားထုတ်ကုန်များ: အဆိုပါမူရင်း Superfoods
နှိမ့်ချပျားရည်ပျားသဘောသဘာဝရဲ့အရေးအပါဆုံးသက်ရှိထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပျားသူတို့အပင်ဝတ်မှုန်ကူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပန်းပွင့်ကနေဝတ်ရည်ကိုစုသိမ်းသကဲ့သို့ငါတို့သညျလူသားတို့စားသောအစားအစာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ ပျားမပါဘဲကျွန်ုပ်တို့အစားအစာအများကြီးကြီးထွားလာခဲအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ယာကဏ္ဍလိုအပ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခြင်းအပြင်, ပျားကျနော်တို့ရိတ်နှင့်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုတော်တော်များများထုတ်ကုန်စေ။ ပြည်သူ့စုဆောင်းနှင့်ထောင်စုနှစ်အဘို့ထိုသူတို့သုံးအစားအစာ, အနံ့အရသာနှင့်ဆေးဝါးအဘို့ထိုသူတို့သုံးပြီးပါပြီ။ ယနေ့ခေတ်သစ်သိပ္ပံကျွန်တော်အမြဲသိသောအရာကိုမှတက်ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ်: ပျားထုတ်ကုန်အကြီးအဆေးဖက်ဝင်နှင့်အာဟာရတန်ဖိုးရှိသည်။
ပျားရည်ပျားထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုစဉ်းစားသည့်အခါစိတ်ကိုမှကြွလာသောပထမနှင့်အထင်ရှားဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကုန်စုံစတိုးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါသည်နှင့်များစွာသောလူသန့်စင်ပြီးသကြားများအရပျ၌တစ်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်အဖြစ်ကသုံးပါ။ ပျားရည်ပျားပန်းပွင့်ကနေဝတ်ရည်စုဆောင်းနေဖြင့်လုပ်သောအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က regurgitating နှင့်၎င်း၏အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများတက်စေသောကြားအာရုံစူးစိုက်အငွေ့ပျံခွင့်အားဖြင့်ပျားရည်ထဲသို့ဝတ်ရည်လှည့်။ သကြားများအပြင်, ပျားရည်သဲလွန်စဗီတာမင်ဓာတ်ပမာဏ, တွင်းထွက်ပစ္စည်း, ဖိုင်ဘာ, ပရိုတိန်းနှင့်အခြားတ္ထုများပါရှိသည်။
ပျားရည်၏အရသာထူးခြားတဲ့နှင့်အခြားသောကြားဖို့ကောင်းတဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ပျားရည်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုဝေးအရသာနှင့်ချိုကျော်လွန်သွားပါ။ ပျားရည်ကိုသင်စားနိုင်တစ်ခုခုအဖြစ်နှင့်လိမ်းဆေးအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး, မြောက်မြားစွာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်။ သင်အသုံးပြုပျားရည်ကုန်ကြမ်းများနှင့် unprocessed ဖြစ်သင့်ကြောင်း, သို့သော်သတိထားပါ။
antioxidants ။ ပျားရည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဆိပ်ငါတို့အလောင်းပြုထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ကူညီပေးသော antioxidants, ကြွယ်ဝနေသည်။ ပျားရည်, အထဲတွင်ပစ္စုပ္ပန်ပို antioxidants အဆိုပါမဲမှောင်။
ဓာတ်မတည့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ။ ကုန်ကြမ်းနှင့် unprocessed ပျားရည်ဝတ်မှုန်, မှိုများနှင့်ဖုန်မှုန့်အပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေတာမျိုး, ပါဝင်သည်။ သငျသညျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ဒေသဆိုင်ရာဧရိယာထဲမှာထုတ်လုပ်ခဲ့မရှိသောပျားရည်တစ်နည်းနည်းကိုစားလျှင်သင်သင့်တည့်မှုရောဂါလက္ခဏာများအနေဖြင့်ကယ်ဆယ်ရေးရကွောငျးတှေ့ပါလိမ့်မယ်။ တာမျိုးတွေနဲ့ဟောဒီမှာအားဖြင့်သင်တို့သူတို့ကိုသဘာဝကိုယ်ခံစွမ်းအားတည်ဆောက်ကြလော့။
ကျန်းမာရေး Digestive ။ ပျားရည်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်အစာခြေတိုးတက်လာဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ အထက်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအတွက်ပျားရည်ရဲ့ antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများအနာဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုဘက်တီးရီးယားအဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အူပျားရည်ထဲမှာအစာခြေအကူအညီ probiotics ပေးပါသည်။
အနာကိုကုစားခြင်း ။ တစ်လိမ်းလိမ်းသောနံ့သာအဖြစ်, ပျားရည်ဒဏ်ရာများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာပဋိဇီဝဆေးသက်ရောက်မှုရှိပြီးသူတို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်အောင်စင်ကြယ်သောအနာစောင့်ရှောက်။
anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ acute ရောင်ရမ်းခြင်းအနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုအစားအသောက်များတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောအမေရိကန်တွေဒုက္ခသောအနိမ့်တန်း, နာတာရှည်ရောင်ရမ်းပျက်စီးစေပါသည်။ ပျားရည်နှလုံးရောဂါကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင့်သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းနာတာရှည်ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချဖို့လူသိများသည်။ ဒါဟာအစကောင်းနဲ့အဆိုးလက်စထရောများအကြားအချိုးတည်ငြိမ်။
ဖိနှိပ်မှုချောင်းဆိုး။ သင်တစ်ဦးချမ်းအေးပြီနောက်တစ်ကြိမ်ပူလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မှပျားရည်တစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းထည့်ပါ။ ပျားရည်တစ်ချောင်းဆိုးဖိနှိပ်ကြောင့်အအေးမိရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်ရန်ကူညီနှင့်၎င်း၏ကြာချိန်ကိုလျော့ချစေခြင်းငှါအချို့သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။
type-2 ဆီးချိုရောဂါ။ အမျိုးအစား-2 ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူတို့အဘို့, ကသကြားနှင့်အတူသွေးကြောရေလွှမ်းမဟုတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပျားရည်ကဆီးချိုရောဂါအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုကသန့်စင်ပြီးသကြားထက်သွေးကြောထဲသို့ပိုပြီးနှေးကွေးစွာဖြန့်ချိသည်။
ပျားဝတ်မှုန်ပျားရည်ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာပျားပန်းပွင့်ကနေစုဆောင်းနှင့်အသေးစား granules သို့ထုပ်ပိုးသောဝတ်မှုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပျားဘို့, ဝတ်မှုန်ဘောလုံးအုံထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကအုံနဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုစဝတ်မှုန်ထုပ်ပိုးအဖြစ်ပျားရဲ့တံတွေးကနေအင်ဇိုင်းတွေ, ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဝတ်ရည်အပါအဝင်ကဆက်ပြောသည်နေကြသည်။
လူသားမြားသညျအဘို့, ပျားဝတ်မှုန်တစ်ဦးအာဟာရအင်အားကြီးဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအစားအသောက်များတွင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ဒါဟာပျားဝတ်မှုန်ပျားရည်နှင့်တော်ဝင်ဂျယ်လီကဲ့သို့အခြားပျားထုတ်ကုန်များတွင်မတွေ့ရှိကြောင်းသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါ့အပြင်များပျားဝတ်မှုန်ထုတ်ကုန်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်။ အဆိုပါသဘာထုတ်ကုန်မဟုတ်ပင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အပြီးအစီးအာဟာရ။ ပျားဝတ်မှုန်ကျနော်တို့လူသားမြားသညျကသေးငယ်တဲ့ granules အတွက်လိုအပ်သောအာဟာရအားလုံးပါဝင်သည်။ ဒါဟာပရိုတိန်း, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အဆီ, antioxidants, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာပြည့်စုံအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။
အလေးချိန်ကိုထိန်းချုပ်။ ပျားဝတ်မှုန်ကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်ပုံမှန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည့်အခါလူတွေကကိုယ်အလေးချိန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့တွေ့ရှိထားသည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေး Digestive ။ သုတေသနပျားဝတ်မှုန်အစာစားခြင်းကသင်၏အစာခြေကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်သည်ကိုပြသထားသည်။ ဤသည်ကဖိုက်ဘာအဖြစ် probiotics ပါရှိသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။
သွေးအားနည်းရောဂါ။ ပေးထားသောသွေးအားနည်းလူနာပျားဝတ်မှုန်သွေးကြောထဲမှာသွေးနီဆဲလ်တစ်ခုတိုးခံစားခဲ့ရသညျ။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပျက်နားလည်သဘောပေါက်ပေမယ့်ပျားဝတ်မှုန်ဖြည့်စွက်သွေးအားနည်းရောဂါနှင့်အတူလူကကူညီဟန်မပေးပါ။
အသှေးကိုလက်စထရောအဆင့်ကို။ တစ်ဦးဖြည့်စွက်အဖြစ်ပျားဝတ်မှုန်လည်းသွေးထဲမှာလက်စထရောအဆင့်ကိုထိန်းညှိဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ မကောင်းတဲ့လက်စထရော (LDL) ၏အဆင့်ဆင့်ဆင်းစဉ်ကကောင်းသောလက်စထရော (HDL) ၏အဆင့်ဆင့်တက်သွားဖို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသက်ရှည်ခြင်း။ မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများပျားဝတ်မှုန်အချို့အိုမင်းဖြစ်စဉ်များ၏နှေးကွေးစေတယ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာမှတ်ဉာဏ်မြှင့်တင်ရန်ဇီဝြဖစ်လှုံ့ဆော်, နှလုံးနှင့်သွေးလွှတ်ကြောခိုင်ခံ့စေဟန်နှင့်လူအတော်များများသူတို့ကအသက်အရွယ်အဖြစ်ကင်းမဲ့ကြောင်းအာဟာရပေးစွမ်းသည်။
အလုပ်သမားပျား feeds ထားတဲ့ပျားရည်နှင့်အတူရောထွေးခံဖို့မဟုတ်ဘူး, တော်ဝင်ဂျယ်လီမိဖုရားပျားများအတွက်အစားအစာ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကိုလိုနီအတွက်လောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင်ဂျယ်လီတစ်မိဖုရားထက်တစ်လုပ်သားပျားသို့ပိုးလောင်းပြောင်းလဲတာဝန်ရှိသည်အချက်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ တော်ဝင်ဂျယ်လီ၏ဖွဲ့စည်းမှုရေ, ပရိုတိန်း, သကြား, ဆီ, ဗီတာမင်, antioxidants, ပဋိဇီဝဆေးအချက်များ, ခြေရာကောက်သတ္တုဓာတ်နှင့်အင်ဇိုင်းတွေတစ်နည်းနည်းပါဝင်သည်။ ဒါဟာအစသုတေသီများစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့်သောမိဖုရားသို့သာမန်ပျားရည်ပျားပြောင်းလဲဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ထင်သောမိဖုရားပျားအက်ဆစ်, ဟုခေါ်သောဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သည်။
အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု။ ဒါကြောင့်နေရောင်ကနေအရေပြားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးနိုငျသောကွောငျ့တော်ဝင်ဂျယ်လီအချို့လိမ်းအလှအပထုတ်ကုန်များတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူကတောင်ကော်လာဂျင် restore ပြန်နှင့်အညိုရောင်အစက်အပြောက်များမြင်သာလျှော့ချအပါအဝင်ပြီးသားနေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှု, အချို့ကိုပြင်ပေးလိမ့်မည်။
anti-အကျိတ်ဂုဏ်သတ္တိများ။ အချို့လေ့လာမှုများတော်ဝင်ဂျယ်လီ, ကင်ဆာဆဲလ်များထဲသို့ထိုးသွင်းအခါ, မြင်းသရိုက်အနာ၏တိုးတက်မှုနှေးကွေးနိုင်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။
မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး။ တော်ဝင်ဂျယ်လီအချို့သည်အကြံပြုချက်ကိုထောက်ခံအားပေးသူများအမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ကလေးမွေးဖွားတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ပင် PMS လက္ခဏာတွေ relive နိုင်ပါတယ်ဟုဆိုသည်။
ကျန်းမာရေး Digestive ။ တော်ဝင်ဂျယ်လီလည်းချုပ်ဖို့ရင်ဖို့အနာကနေအစာအိမ်အခြေအနေများ၏နံပါတ်ဝေဒနာတွေနိုင်မှလူသိများသည်။
ကုန်ကြမ်း, အော်ဂဲနစ်နှင့် unprocessed ပျားရည်, ပျားဝတ်မှုန်များနှင့်တော်ဝင်ဂျယ်လီ, ပိုကောင်းသေးဒေသခံတစ်ဦးပျားမွေးမြူရေးအားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးကျန်းမာရေးစတိုးဆိုင်မှာရှာတွေ့မှအတော်လေးလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်း, ဒါမှမဟုတ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာလေ့လာထားတဲ့ပေါ်တွင်သင်၏လက်၌ရဖို့အဖြစ်လွယ်ကူသောမဟုတ်ကြသည်မဟုတ်သောအုံထဲမှာပျားဖွငျ့အနည်းငယ်အခြားထုတ်ကုန်များရှိပါသည်။ Propolis ဥပမာ, ပျားရည်ကနေလုပ်ရသောသူတို့အုံထဲမှာသေးငယ်တဲ့အက်ကြောင်းနှင့်တွင်းတံဆိပ်ခတ်ထားမှသုံးကြောင်းပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
လူသားမြားသညျအဘို့, propolis လိမ်းပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပီကေဝါးပါစေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ဒါဟာတစ်ဦးအာဟာရအစားအသောက်ထုတ်ကုန်မဟုတ်ပါဘူး။ Propolis antibacterial ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးရှည်လျားဒဏ်ရာများ, ဝက်ခြံများနှင့်အသားအရေအဖုတစ်လိမ်းဆေးတစ်လက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားလည်းရေယုန်, သွားရောဂါကူးစက်မှုများနှင့်ရောင်ရမ်းသောရောဂါများကုသရန်ကူညီစေခြင်းငှါပြသထားတယ်။ အဆိုပါသက်သေအပြီးသတ်သောသည်မဟုတ်, propolis သုံးစွဲဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။
သွင်းကုန်ပျားသူတို့ရဲ့ပျားရည်ဖြီး၏အမြောက်အများတက်အောင်သုံးကြောင်းဖက်တီးပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတွေဟာအစာကြေဖို့ခက်ခဲတဲ့သောသဘောစားသုံးဆီမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအဆိပ်သည်မဟုတ်, သင်ကအစာစားရန်ကြိုးစားလျှင်သင်ကထဲကသိပ်အစာအာဟာရမရပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုကကောင်းမွန်သည်သဘာဝအအလှကုန်, ဆပ်ပြာ, လိမ်းဆေးနှင့်ဖယောင်းတိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ပျားရည်, ပျားဝတ်မှုန်များနှင့်တော်ဝင်ဂျယ်လီအားလုံးသင့်ရဲ့ဖျော်ရည်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ပျားဝတ်မှုန်နှင့်ပျားရည် ပတ်သက်. လောက်ကြီးသောအမှုကိုသူတို့ကအဖြစ်ကောင်းစွာသင်အံ့သြစရာကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြားပေးခြင်းအဖြစ်အကြီးအမြည်းစမ်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပျားဝတ်မှုန်ပျားရည်ကဲ့သို့ချိုမြိန်သည်မဟုတ်, တကကောင်းတဲ့အရသာရှိပါဘူး။ ဒါဟာကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းမိတ်ဆက်ပေး။ တစ်ကြိမ်မှာအနည်းငယ်အစေ့တွေနဲ့ Start နဲ့တဖြည်းဖြည်းတဦးတည်းလက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့်ဖျော်ရည်နှုန်းတဦးတည်းဇွန်းအကြားဖို့သင်အသုံးပြုပမာဏကိုတိုးမြှင့်။ သင့်ရဲ့ဖျော်ရည်ထဲသို့ရောနှောပျားဝတ်မှုန်ကြိုးစားပါနှင့်ရေခဲမုန့်ပေါ်ဖျန်းနဲ့တူထိပ်ပေါ်မှာဖြန်း။ ပျားဝတ်မှုန် featuring ငါ၏အဖျော်ရည်ချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံးအတှကျအောက်ပါ link ကို click လုပ်ပါ။
သငျသညျသင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ, အခြားမည်သည့်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်ရာ၌သင်တို့၏ဖျော်ရည်မှစေတနာစိတ်ပျားရည်ထည့်နိုင်သည်။ ဒါဟာအားလုံးသည်အခြားအရသာနှင့်အတူကောင်းစွာလက်ထပ်, ဒါပေမယ့်လည်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ထွန်းလင်းနိုင်ပါ။ အမြဲတမ်းအော်ဂဲနစ်နှင့်ကုန်ကြမ်းပျားရည်ကိုရှာခြင်းနှင့်သင်ပင်ပိုကောင်းမယ့်ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထုတ်ကုန်ကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ဆိုရင်။ ဒေသခံတစ်ဦးပျားရည်အဘို့သင့်အနီးဆုံးလယ်သမားရဲ့စျေးကွက်စစ်ဆေးပါ။
တော်ဝင်ဂျယ်လီ၏အရသာလူတိုင်းကိုဆွဲဆောင်မပေးပါ။ ဒါဟာဌာပနာမုနိုင်ပါတယ်, အချို့ကအနည်းငယ် fishy ကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်။ သတငျးကောငျးကိုသငျသညျကိုသာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိရန် (ဖျော်ရည်နှုန်းတစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဇွန်းခန့်) ကတစ်နည်းနည်းလိုအပ်ပါတယ်နှငျ့သငျအားကောင်းအရသာနှင့်သင်၏ဖျော်ရည်ထဲမှာ mask နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တကယ်တော့ခုနှစ်, အရသာဖုံးကွယ်ဖို့ပျားရည်နှင့်အတူကချိတ်တွဲစမ်းပါ။
ပျားထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့အာဟာရအကြောင်းအရာနှင့်နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများအတွက်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်စွမ်းများအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုထုတ်ကုန်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်မတည့်ပျားတွေဟာသို့မဟုတ်သင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်လျှင်အစဉ်အမြဲသတိထားရလိမ့်မည်။ ရှားပါးနေချိန်မှာသင်ကပျားဆူးမှမတည့်ဖြစ်ကြပါလျှင်, ထိုပျားထုတ်ကုန်များ၏တစုံတယောက်သောသူသည်သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာမယ့်တုံ့ပြန်မှုရှိသည်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပျားထုတ်ကုန်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံကဘာလဲ? သင်တစ်ဦးအနှစ်သက်ဆုံးရှိပါသလား အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ထွက်ခွာခြင်းဖြင့်ပြောပြကြဘူးပါ။
အချိန် post: ဒီဇင်ဘာ-13-2016
ပျားထုတ်ကုန်များ: အဆိုပါမူရင်း Supe ...
နှိမ့်ချပျားရည်ပျားသဘောသဘာဝရဲ့အရေးအပါဆုံးသက်ရှိထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပျားကြောင်းကျနော်တို့အစားအစာထုတ်လုပ်မှုများအတွက်အရေးပါလှသည် ...